“मुटुसम्बन्धी समस्याका लागी अचुक औषधी हो तरुल, यस्ता छन् अन्य फाइदाहरु”जनहित का लागि सेयर गरौं । – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
“मुटुसम्बन्धी समस्याका लागी अचुक औषधी हो तरुल, यस्ता छन् अन्य फाइदाहरु”जनहित का लागि सेयर गरौं ।
“काठमाडौँ -स्वादका लागि मात्र नभएर स्वाथ्यका लागि पनि उतिकै फाइदा हुन्छ । तरुल मानव सभ्यताको विकासको सुरुवाती चरणमा मानिसले खाने भनिएको कन्दमूल मध्येको एक तरुल पनि हो ।
“तरुल प्राय सबैको भान्सामा पाकिने तरकारीको रुपका पनि लिइन्छ । यसलाई उसिनेर खाने पनि गरिन्छ । तरुललाई मागेसक्रान्तिमा खाने गरिन्छ । तरुललाई आयुर्वेदिक औषधिको रुपमा पनि प्रयोग गरिन्छ । यो खानुका धेरै फाईदा छन । यसले छाला तथा स्वासप्रश्वाससम्बन्धी राम्रो मानिन्छ ।
“तरुलमा भिटामिन बी पनि पाइन्छ । मुटुसम्बन्धी समस्या लाई निको गराउछ । यसले विभिन्न रोग बाट वच्न सकिन्छ । त्यसैले मस्तिकको विकास हुने र बुझ्ने क्षमतामा सुधार आउछ तरुलमा पर्याप्त मात्रामा कार्वोहाइड्रेड पाइने हुँदा यसलाई शक्तिको प्रमुख स्रोतका रुपमा पनि लिने गरिन्छ ।
“आज माघे सङ्क्रान्ति पर्व, तरुल र खिचडी खाई धुमधामका साथ मनाईंदै
“काठमाडौँ माघ १ – प्रत्येक वर्ष सौर मासअनुसार माघ महिनाको पहिलो दिन मनाइने माघे (मकर) सङ्क्रान्ति पर्व आज देशभर स्नान, जप, तप, ध्यान साधना, दान आदि गरी मनाइँदै छ ।
“सूर्य धनु राशिबाट मकर राशिमा प्रवेश गर्ने सङ्क्रान्ति भएकाले माघ १ गतेलाई माघे(मकर) सङ्क्रान्ति भनिन्छ । माघ १ गतेदेखि उत्तरायण शुरु हुने भएकाले दिनभन्दा रात छोटा हुँदै जान्छन् । उत्तरायण शुरु हुने दिनको स्नान, जप, तप, ध्यान साधना, दान आदिलाई पुण्य दायक मानिन्छ । यसैले आजको दिन देवघाट, त्रिशूली, कालीगण्डकी, वाग्मती, इन्द्रावती, त्रिवेणी, रिडीलगायतका स्थानमा माघ स्नान गर्न भक्तजनको भीड लाग्छ । यी ठाउँमा आज विशेष मेलासमेत लाग्ने गर्छ ।
“तराईवासीले माघ १ गतेलाई नहान अर्थात् नुहाउने पर्वका रुपमा मनाउँछन् । वर्षभर ननुहाउने तराईवासीले आज भने अनिवार्य नुहाउनुपर्ने मान्यता राख्छन् । बिहानै तीर्थस्थलमा गई स्नान गरेर तिल दान गर्नाले सुन दान गरे सरहको पुण्य प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ । धर्मसिन्धुमा माघ १ मा घ्यू, चाकु, तिलका परिकार, खिचडी नखाने, दान नगर्ने, जलाशयमा गई स्नान नगर्ने, ध्यान नगर्ने व्यक्ति जीवनभर रोगी हुने उल्लेख गरिएको धर्मशास्त्रविद् एवं नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्रा डा रामचन्द्र गौतमले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।
“उत्तरायण भएपछि शुभकर्म गर्न उत्तम मानिन्छ । आज स्नान, दान, व्रत, ध्यान गर्ने व्यक्तिले पुण्य प्राप्त गरी मनकामना पूर्ण हुने जन विश्वास छ । माघे सङ्क्रान्तिका दिन घ्यू, चाकु, तिलका परिकार, तरुल, पालुङ्गो, खिचडी आदि खाने चलन छ । यी परिकारले जाडोमा न्यानो प्रदान गर्ने भएकाले चिसो समयमा पर्ने पर्वमा ताता परिकार खाने गरिएको हो । यी खानाले त्रिदोष नाश हुने धार्मिक विश्वास छ ।
“आजका दिन शरीरमा तिलको तेलले मालिस गर्दा दूषित पदार्थ बाहिर निस्कन्छ भन्ने विश्वास छ । शरीरका नाडी, स्नायुमण्डल र हड्डीलाई तिलको तेल मालिसबाट सुदृढ र स्वस्थ राख्न सकिने आयुर्वेद शास्त्रीय मान्यता छ । सूर्य उत्तरायण भएपछिको मृत्युलाई उत्तम मानिन्छ । महाभारत युद्धमा मृत्यु श्ययामा पुगेका भीष्मले इच्छा मृत्युको वरदान पाएअनुसार सूर्य उत्तरायणपछि नै शरीर त्यागेका थिए । आजका दिन भक्तपुरको तिलमाधव नारायणस्थानमा पनि मेला लाग्ने गर्दछ ।
“माघ महीनामा माघ माहात्म्यको पनि ठूलो महत्व छ । स्कन्द पुराणको माघ माहात्म्यअन्तर्गत केदारखण्डको कुमार र अगस्त्यबीच भएको संवादअर्थात् स्वस्थानी सुन्ने सुनाउने क्रम पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि शुरु हुन्छ । यो क्रम माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म जारी रहन्छ । यस वर्ष अधिकमास (मलमास) कारण पौष शुक्ल पूर्णिमा केही दिनपछि परेको छ ।
Previous “अचम्म”नहुनुहोस् ! अदुवाको प्रयोगले कपाल बढ्छ, जान्नुहोस् ४ अन्य फाइदा”
Next “स्तन आकर्षक बनाउन युवतीहरु यस्तो तरिका अपनाउँछन्”
“हाडजोर्नी”दुखाइको अचुक औषधि जाइफल, यसरी गर्नुस् प्रयोग बिधिसहित हेर्नू होस।! सेयर गर्नु होस ।”
नेपालीले माल पाएर,चाल नपाएको औषधिजन्य, गुणले ‘भरिपूर्ण करीपत्ता’
“कोरोना संक्रमणमुक्त भएपछि,को कमजोर शरीरलाई कसरी फुर्तिलो बनाउने”